व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व — samadhannews.com
व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व
पोखरामा निजी क्षेत्रको साझा संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ ६३ वर्ष पुगेर ६४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो साधारणसभा यही २५ गते गर्दै छ । यो साधारणसभामा के के हुन्छ । आगामि दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरुको भावना अझै कसरी समट्ने भन्ने विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेसँग गरिएको संवाद ।
वािर्षकोत्सवमा जुट्दै हुनुहुन्छ । निर्वाचित हुँदा गरेका वाचा र यहाँसम्मको यात्रामा कस्तो अनुभव हुँदै छ ?
अनुभव नयाँ होइन । बोलेका कुरा कत्तिको पूरा गरेका छौं भन्ने हेर्ने हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ नितान्त व्यवसायीहरुको संस्था हो । तर व्यवसायीको हक अधिकार मात्र हामीले हेरेका छैनौं । हाम्रा गतिविधि र कामले यहाँको समग्र विकासमै प्रभाव पार्दै आएको छ । हाम्रो विगत र वर्तमान समेत यही हो । संघमा हाम्रो टिम आएपछि यहाँले देख्नुभएकै छ । मर्दिखोला खानेपानी शुद्धीकरण अभियान अनुरुप ३ ठाउँमा शवदाहस्थल निर्माण भएका छन्, त्यहाँ सार्वजनिक सौचालय र लुगाधुने ठाउँ समेत निर्माण गरिएका छन् । महानगरपालिका, खानेपानी संस्थान पोखरा र हाम्रो सहकार्यमा यो महत्वपूर्ण काम भएको हो । त्यसैगरी यहाँले हेर्नुभयो भने चीनको तिब्बतबाट प्राप्त भएका १ हजार थान सडक सोलार बत्ती विभिन्न ठाउँमा जडान गरिएका छन् । जिरो किलोमिटर देखि हल्लनेचोकसम्म सडक डिभाइडर निर्माण भएको छ । यसमा राज्यका सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो सहकार्य भएको छ । यो कार्यकालमा पोखरा औद्योगिक व्यापार मेला भर्खरै भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौं ।
तपाईं नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा विमानस्थल निर्माणमा दबाब, उद्यमशीलताको विकास र व्यावसायिक वातारण तयार गर्ने भन्नु भएको होइन र ?
हो, हाम्रो टिमले नै पोखरा विमानस्थलको निर्माणको सुनिश्चितता भनेको थियो । तपाइलाईं नै थाहा भएको विषय हो, हामी निरन्तर यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अब विकासको काम नै शुरु भएको अवस्थामा सुनिश्चित भइसक्यो । तैपनि बेला बखत खबरदारी अझै गर्नुपर्छ नै ।
मलाई राम्रोसँग याद छ । त्यो बेला हामीले भनेको के भने, पोखराका व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लान सघाउँछौं भनेका थियौं । विभिन्न खण्डमा विभिन्न टोलीलाई मित्रराष्ट्र चीनमा पठाएर व्यवसाय कसरी गर्ने र एक्जिविसनमा भाग कसरी लिने भनेर पठाएर हामीले पहल ग¥र्यौं । यहाँ पनि हामीले १५÷२० वटा तालिम नियमित गरेका छौं । यो निरन्तर रहन्छ नै । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि, सही ढंगले लेखा राख्ने सवालमा कर कार्यालयसँग सहकार्य गरेर तालिम प्रदान गरेका छौं । यसका अलवा व्यवसायीको समस्या पहिचानका लागि हामीले झन्डै सबै व्यवसायीलाई प्रश्न पत्रनै पठाएर कस्को के समस्या छ । कसैको करमा होला, कसैको घरभाडामा होला, कसैको दर्तामा होला, कसैको भन्सारमा होला । यस्ता समस्या समाधान गर्ने भनेर हामी लागि परेका छौं । अहिलेसम्म पनि हामी फाइन्डिङमै छौं ।
यहाँसम्म आइपुग्दा थालेका तर पूरा नभएका अनि पूरा गरेरै छाड्छु भन्ने केके छन् ?
मर्दीखोलामा थप शवदाहस्थल बनाउने काम भइरहेको छ । ती छिट्टै पूरा हुन्छन् । तपाईंलाई थाहा छँदै छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासनको सहकार्यमा हामीले शहरका मूख्य भाग र चोकमा सिसी क्यामेरा जोड्ने विषयमा पहलकदमी लिएका छौं । त्यसलाई पनि पूरा गर्छौ । पोखरा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहकार्यमा हामीले जब पोर्टल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यस्तै पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा स्थायी डोम निर्माण गर्ने लगायतका काम हामी गछौं ।
वार्षिकोत्सवमा के हुन्छ ?
सबै प्रक्रियागत रुपमा अनुमोदन गर्ने कुरा हो । त्यो स्वभाविकरुपमा हुन्छ । पुराना व्यवसायीलाई साधारणसभामा सम्मान हुन्छ । समग्रमा प्रदेश नम्बर ४ को आर्थिक उत्थान उद्यमी व्यवसायीको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्छौं । त्यसमा बहस र अन्र्तक्रिया हुन्छ नै ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय र तपाईंहरु बीच १ खालको युद्धजस्तो देखिन्छ । एक आपसमा सहकार्य हुनुपर्नेमा व्यवसायीको प्रतिकुल भएको व्याख्या तपाईंले किन गर्नुभएको ?
तपाइले सोधजस्तो युद्ध त होइन । कहिले काहीं विभिन्न विषयमा समस्या पर्ने गरेको चाँही हो । हामी राज्यलाई के भन्छौं भने हिजो खुला अर्थनीति जहिले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर छोड्दिने । अहिले यो गर त्यो गर भनेर अंकुश लगाउँदा पक्कै पनि समस्या देखिन्छन् । हामीले भनेको विस्तारै काम गरौं । कतिपय सवालमा व्यवसायीलाई बुझाएर काम गरौं । सुधार्ने मौका दिउँ भन्ने हो । उहाँहरु अल्लि कहिलेकाहीँ हतोत्साही बनाउने ढंगले आउनुहुन्छ । अकस्मात अनुगमन, धरपकडले सयको स्पिडमा ब्रेक लागेको जस्तो हुन्छ । क्रमश दर्ता गर्ने, दायरामा ल्याउने हो । यसमा हाम्रा केही विमति छन् । करका विषयमा हामीले मिलेर २÷४ वटा तालिम पनि दिइसकेका छौं । विस्तारै हुन्छ । एकैपटक आतंकित पार्नुहुन्न भन्ने हो ।
त्यही त किन सबै व्यवसायीलाई समावेश गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ त ?
होइन, यसमा यस्तो छ । हामीकहाँ आवद्ध हुन राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । दर्ता भएको हुनुपर्छ । हामीले भनेरमात्र हुँदैन । राज्यले सबैलाई दायरामा ल्याउनु प¥यो नि । हामीसँग उहाँहरु आवद्ध नहुन पनि सक्नुहुन्छ । तर राज्यका विभिन्ननिकायमा दर्ता गराउने जिम्मा राज्यका निकायकै हो । यसमा हामीलाई दोष दिन जरुरी मैले देख्दिन । हो, सबैलाई समेट्ने कुरा गर्नुलाई हामीले अन्यथा पनि लिएका छैनौं ।
हामी सम्बन्धित सबै निकायमा दर्ता भएर व्यवसाय गरेका छौं । यहाँ दर्ता नगरी चलाइएकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा समस्या भयो । उद्योग वाणिज्य संघले पहल गरिदेओस् र समस्या हटाओस् भन्ने व्यवसायीको अपेक्षालाई के भन्ने ?
त्यो अपेक्षा आफैमा सही हो, हामी यस सम्बन्धी पहलकदमी गर्न तयार छौं । राज्यका निकायमा मिलेर काम गर्न तयार छौं । तर कसले दर्ता गरेको छ छैन भनेर जासुसी गर्ने काम हाम्रो होइन । यो काम राज्यले गर्ने हो । कर तिरेकालाई सम्मान गर्ने हो । दर्ता नभएकालाई दर्ता गर्न लगाउने र दायरामा ल्याउने हो । हामी पनि राज्यले भन्दा सहयोग गरेका छौं । हिजो कर सप्ताहा मनाउँदा हामी पनि सँग–सँगै अनुगमनमा गएका थियौं । हाम्रो पनि माग सबैलाई राज्यले दायरामा ल्याओस् भन्ने हो । राज्यसँग सबै संयन्त्र छ । त्यसको परिचालन गर्नुप¥यो नि ।
पोखरा उद्यो गवाणिज्य संघ यहाँको जेठो संस्था, निजी क्षेत्रको छाता संस्था पनि हो । व्यवसायीहरु यसको नेतृत्वले व्यवसायीको हितभन्दा पनि अन्य कतै मोडिएको हो कि भन्ने शंका गर्छन् नि ?
यो अज्ञानताको कुरा हो । हेर्नुस्, आजको पोखरा हिजोको परिकल्पना हो । हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे कलेज होस्, चाहे हस्पिटल होस्, बाटोघोटो होस् सबै चिज बनाउन पोखरा उद्योग वाणिज्यसंघको आफ्नो योगदान थियो । आजको पोखरा हिजोको पोखरा व्यापार संघको कल्पना हो । नयाँ आउनेहरुलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो व्यावसायिक कुरा गर्नुपर्नेमा किन समाजिक कुरा गर्नुप¥यो भन्ने लाग्छ । हामीले व्यावसायिक र सामाजिक क्रियाकलाप भनेको सँग–सँगै जानुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले सरकारी निकायलाई यसो गरौं भनेर लबिङ गर्नै पर्छ । हो, हामीले हाम्रा व्यवसायीको हक हितका लागि नलागेको भए यो अरोपलाई सत्य भन्न मिल्थ्यो । तर, हामीले आफ्नो कर्तव्य निभाएरै यो सब गरिरहेका छौं । त्यसैले यो सबै आरोपका लागि आरोप बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । उहाँहरुका समस्या छन् भने उद्योग वाणिज्य संघमै आएर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसको सुनुवाइ गर्न हामी तयार छौं । हामी गरिरहेका छौं ।
प्रस्तुति ः गोविन्द सुवेदी